Janoary - Febroary - Marsa - Avrily - Mey - Jona - Jolay - Aogositra - Septambra - Oktobra - Novambra - Desambra Tetiandro malagasy Tetiandro gregoriana Tetiandro
Ny volana febroary dia volana faharoa ao aminnytetiandro gregôriana sy joliana. Avy aminny teny latina hie februarius izy io, avy eo ny Anglisy manonona azy hoe february ary lasa febroary izy aminny fiteny malagasy. Taminny Andro Taloha izy no volana farany aminny tetiandro rômana, taminio fotoana io, nanomboka taminny 15 Martsa ny kalandrie.
Ny volana Martsa na Marsa dia volana fahatelo ao aminny tetiandro gregoriana na joliana. Avy aminny teny latina hoe Martius io anarana io sady mifandray aminny anaranilay andriamanitra romana hoe Mārs. Ireo zavatra nitranga taminity Martsa.
Ny volana Janoary dia ny volana voalohany aminny kalandrie gregôriana sy joliana. Avy aminny teny latina hoe Januarius, izay avy aminny anaranny andriamanitra rômana iray Janosy Janus. Taminny Andro Taloha, izy no volana faha 11 anatinny kalandrie rômana.
Ny Asara dia iray aminireo volana malagasy mitondra anarana avy aminny teny sanskrita. Ny volana Asara aminny Betsimisaraka sasany anefa ataonny Malagasy aminny ankamaroanny faritra hoe Maka na Volamaka. Io teny hoe Asara io ihany, aminny Betsileo sasany, dia ataonny Malagasy aminny ankamaroanny faritra hoe Sakave. Aminny Antesaka dia fotoam-pahavokaranny vary ny Asara, ka mifanandrify aminny volana Desambra izany hoy i Richardson 1885 fa aminny Novambra - Janoary kosa hoy Rakotosaona 1972 sy i Descamps 1936. Aminny faritra maro eto Madagasikara dia anondroana ny fizaran-taona mafana sy be ...
Ny hoe Fiaviana dia teny malagasy nandikana ny teny frantsay hoe Avent, izay mifototra amin’ny teny latinina Adventus izay midika hoe "fahatongavana", izany hoe fiavian’ny Mesia no dikany. Herinandro efatra mialoha ny fankalazana ny Fahaterahanny Mpamonjy ny Fiaviana. Ny Fiaviana dia fiomanana amin’ny fahatongavan’i Kristy voalohany, tahaka ny maha fiomanana amin’ny Paka ny karemy. Ho an’ny Eglizy manaraka ny tetiandro gregorianina, ny Fiaviana no manomboka ny taona litorjika vaovao. Raha aloha indrindra ny alahady voalohany amin’ny fiaviana dia 27 Novambra, ary raha tara indrindra kosa di ...
february ary lasa febroary izy amin ny fiteny malagasy Tamin ny Andro Taloha izy no volana farany amin ny tetiandro rômana, tamin io fotoana io, nanomboka tamin ny
Febroary - Marsa - Avrily - Mey - Jona - Jolay - Aogositra - Septambra - Oktobra - Novambra - Desambra Tetiandro Tetiandro malagasy Tetiandro gregoriana
isaky ny efa - taona 29. Ny iray volana ao amin ny tetiandro malagasy dia matetika misy 29 andro. Ny tetiandro hebreo sy silamo dia ahitana volana misy 29 na
Taloha, izy no volana faha 11 anatin ny kalandrie rômana. Tetiandro Tetiandro malagasy Tetiandro gregoriana Volana ao anatin ny taona: Janoary, Febroary
mitaha amin ny taona ao amin ny tetiandro gregoriana. Izany hoe ny iray taona gregoriana dia misy 12 volana malagasy miampy 10 na 11 na 12 andro.. Misy
telo ireo dia mifandray hentitra amin ny fety telo lehibe jiosy, dia ireo Sheloshet Haregalim. Tetiandro hebreo Tetiandro miozolmana Tetiandro malagasy
hoe الأربعاء al - arbi ā izay midika hoe andro fahefatra Alatsinainy - Talata - Alakamisy - Zoma - Asabotsy - Alahady Tetiandro Tetiandro malagasy